Waxa la sheegay in deegaanka amxaarada hosbitalada ku yaala qaar ka mid ah laga joojiyay adeega caymiska cafimaadka – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in deegaanka amxaarada hosbitalada ku yaala qaar ka mid ah laga joojiyay adeega caymiska cafimaadka
Waxa wargayska addis maleda uu waramay xafiiska cafimaadka ee deegaanka amxarada oo sheegay in qaar ka mid ah hosbitalada ku yaala degaankaasi laga joojiyay adeegi caymiska ee cafimaadka sababo la xidhiidha lacagtii ka midka ahayd heeshiiska oo aan la bixinin awgeed. Waxaana dhacday in lacgti dakhligu ay yaraatay.
Endhalemahu Kindhe oo ah hogaamiyaha adeega kooxda cafimaadka bulshada ee xafiiska cafimaadka degaanka ayaa sheegay in markii ay heshiiska kala saxeexanayeen hosbitaalada iyo caymiska cafimadku ay ku heshiiyeen in hal sano ay daboolaan adeega cafimaad oo dadka ka midka ah adeegasi ah. Balse madaama ay xiligan xaadirka ah koradhay lacagtii lagu bixinayay adeega cafimaadka oo misaanayadii uu xafiiska caymisku ku bixiyay sanadka ay dhamatay xiligii loogu talo galay ka hor, Sidaas darteedna uu xafiisku joojiyay lacagihii uu siinayay hosbitalada qaar ee degaankaasi ee dhameeyay misaaniyadoodi loogu talao galay halka sano labo bilood ka hor.
Waxa kale oo uu wargayska uu sheegay hogaamiyaha kooxdasi in hosbitalada laga joojiyay lacagtii adeega cafimaadka ee degaankasi ay ka mid yihiin hoosbitalada dhebre markoos iyo hosbitaal ku yaala bariga gojaam oo la yidhaahdo biibuny.
Waxa intaasi dheer bu yidhi in dadka loo fidiyo adeega caymiska ee cafimaadka oo tiro yar iyo in lacagta adeega lagu bixiyo oo yar ay kaeentay in misaaniyadau ay yaraato oo ay sabab uu noqotay in la joojiyo adeega. Waxa kale oo uu xusay in lacagta lagu bixiyo adeega cafimaadka ee qofkiiba ee ka midka ah adeega caymiska cafimaadka ay sandkiiba gaadhayso 350 ilaa 400, balse sanadkanna ay jiraan shakhsiyaad ka mid ah adeegaasi caymiska cafimaadka oo laga bixiyay sanadkii lacag gaadhaysa ilaa 100 kun iyo 1000 bir. Arintanina waxa ay sababtay in xafiiska adeega caymisku uu lacagtii misaaniyada sanadka loogu talo galay ay dhamato xiligii loogu talogalay ka hor, sidaasi darteedna xafiiska adeega caymisku heshiiski uu la galay xarumaha cafimaadkana in uu joojin karo.
Waxa la cadeeyay in hosbitaalada laga joojiyay adeega caymiska cafimaadka ee degaankaasi ka jira in ilaa bisha tir ay sii socon doontoarintaasi. Waxana arintaasi ay ku dhici kartay madaama dadka ka fa’aidaysta adegaasi caymiska cafimaad ay yihiin dad beero falto ah. Xiliga ay dadkaasi lacagta helaanna waxa weeyaan xiliga beeraha la gooyo ee bisha tir, waxaana ay lacagta caymiska ay bixiyaan xiligaasi.
Waxa uu xafiisku sheegay in dhibatadaasi la xalin doono bisha tir. Xiligan xaadirka ahna madaama adeega caymiska cafimaadka laga fidiyo goobaha cafimaadka oo dhan, in bukaanku ay tagi karayaan goobahaasi cafimaadka oo ay adeega ka heli karayaan inta arintan la xalinayo.waxa kale oo uu xafiisku yidhi in kasta oo xiligan xaadirka ah uu adeegu ka jira hosbitaalo badan oo degaanka ka jira, hadana hadii ay jiraan hosbitaalo kale oo misaaniyadi uu xafiiska caymisku uu qoondeeyay dhameeyay bisha tir ka hor in laga joojin doono adeega.
In kasta oo bu yidhi xafiisku lacag yar lagu bilaabay adeega ka mid lagaga noqonayo caymiska si adeegaasi loo bilaabo markii hore, hadana xiligan xaadirka ah lacagta adeega lagu bixiyo iyo adeega cafimaad ee ay helaan isma laha. Waxa kale oo uu yidhi xiliyada soo socda heshiiska ay wada gali doonaan xafiiska adeega caymiska cafimaadku iyo xarumaha cafimaadku waxa uu noqon doona mid ku salaysan heshiiska ay hayada cafimaadka ee aduunka ee ah in qofku sanadkii uu sadex jeer aado xarumaha cafimaadka lacagta adeega lagu bixiyo in ay noqoto.
Xafiiska cafimaadka ayaa soo jeediyay fikrka ah madaama xafiiska adeega caymiska cafimaadka aan miisaaniyada dawlada waxba laga siinin hadii la kordhiyo lacagta ay bixiiyaan dadka ka midka ah adeega caymiska cafimaadka oo la kordhiyo tirade dadka adeega ka midka ah sida oo kalena la qabto hawlo kale oo dakhli loogu soo xarayn karo xafiiska waxa si joogto ah xal loogu heli kara dhibatooyinkaasi. Waxa kale oo la sheegay in xafiiska adeega caymiska cafimaadku uu yeesho shir waynaha guud bisha tir shirka uu yeelan doonona ay kaga wada hadli doonaan dhibaatooyinka la soo wajahay, sidii xalka dhibaatooyinkaasi loogu heli lahaana ay isku dayi doonaan.
Waxaana wargayska addis maleda uu waramay dadkaasi bukaanka ah ee ka midka ah kana fa’aidaysta adega caymiska cafimaadka oo cabashadooda uu sheegtay. Waxaana ay sheegeen in lacagta ay adeega caymiska cafimaadka ku bixiyeen ay ahayd mid ay adeeg ku heli lahaayen mudo sanad ah, balse xiligan xaadirka ah adeega caymiska cafimaadka ee degaanku hosbitaaladii uu ka joojiyay adeega lacagta oo yaratay awgeed in ay heli kari waayeen adeegi dawaynta ahaa. Waxana ay codsadeen madaama aan goobaha cafimaadka aan laga heli Karin daawaynta qaar oo hosbitaalada kaliya laga helo intii adeega la joojin lahaa ilaa bisha tir waxa haboon in xal kale loo raadiyo oo cida ay khusayso arintanina ay arintani sida ugu dhakhsaha badan uu xaliso.
Total views : 6982822